Zanaka orinasa eo anivon’ny orinasa Air Madagascar ny TSARADIA. Tamin’ny 2 jolay 2018 no nanomboka nitrandraka ireo sidina anatiny eto Madagasikara. Mahavelon-tena, mampidi-bola ary isany mamelona ny Air Madagascar ny TSARADIA araka ny fanazavan’i Eric Koller, filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Air Madagascar.
Mandalo fotoan-tsarotra ny TSARADIA taorian’ny tsy ahafahan’ireo fiaramanidina ampiasaina manohy ireo sidina mankany amin’ny faritra samihafa, ho fampiharana ny fepetra navoakan’ny ACM (Aviation Civile de Madagascar) ny 24 marsa 2020.
Manofa fiaramanidina ny TSARADIA ampiasaina, ATR ny dimy amin’ireo, izay hofainy amin’ny orinasa hafa any ivelany. Araka ny nambaran’i Eric Koller dia 50 ka hatramin’ny 80 000 dolara isam-bolana ny saram-panofana ny fiaramanidina ATR iray ampiasain’ny TSARADIA. Mavesatra ho an’ny orinasa izany amin’izao tsy fahafahana miasa izao.
Misy ny fifampiresahana amin’ireo orinasa mpampanofa ireo ATR ireo, toy izany koa amin’ny saram-piantohana sy ny fandaniana amin’ny herinaratra satria mandalo krizy ny orinasa, hoy izy ary hisy ny drafi-panavotana ny orinasa haroso ary ifampiresahana amin’ny mpiasa.
Famatsiana: 22 000 taonina vary nafarana, 450 000 taonina ny vary gasy hiandrasana ireo mpanangom-bokatra »